The Rohingya News Bank : Syed Hamid Syed Jaafar Albar
Showing posts with label Syed Hamid Syed Jaafar Albar. Show all posts
Ex-minister says urgent need for proper mechanisms to address refugees in Malaysia
Saturday, 02 May 2020 BY JERRY CHOONG
Tan Sri Syed Hamid Albar said the recent backlash against Rohingya refugees by Malaysians indicates the absence of government policies to regularise people who require protection. — Picture by Firdaus Latif
KUALA LUMPUR, May2— Former foreign minister Tan Sri Syed Hamid Albar has called for the implementation ofanational legal framework to ensure the systematic management of refugees in Malaysia.
He said the recent backlash against Rohingya refugees by Malaysians indicates the absence of government policies to regularise people who require protection.
Labels: 2020, en, News, Refugee, Rohinhya, Syed Hamid Syed Jaafar Albar
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေ အပေါ် လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု၊ လူမျိုးစု အလုိုက် ရှင်းလင်း ဖယ် ရှားမှု အထိ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ နုိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မှုတွေ အဆုံးသတ်စေရေး ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကို ICC ၊ ICJ နိုင်ငံတကာ တရားရုံးတွေကနေ ကိုင်တွယ် အဖြေရှာသင့်ကြောင်း မလေးရှား နုိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ အရေး နိုင်ငံတကာ ဆွေးနွေးပွဲက တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ မတ်လ ၂၅ - ၂၆ ရက်ထိ မလေးရှားမှာ ကျင်းပတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ မလေးရှား နုိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး Saifuddin Abdullah နဲ့ မလေးရှား နိုင်ငံခြားရေး ၀န် ကြီးဟောင်း Syed Hamid Syed Jaafar Albar တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ မအင်ကြင်းနိုင်က အပြည့် အစုံ တင်ပြမှာပါ။
Labels: 2019, Dr.Maung Zarni, ICC, ICJ, mm, Nay San Lwin, OIC, Syed Hamid Syed Jaafar Albar, Tun Khin, ရခိုင်, ရိုဟင်ဂျာ, အာဆီယံ